सीतारामको विवाहयात्रा : लखनउदेखि जनकपुरसम्म
अखिलेशका पिता मुलायम सिंह यादवलाई समाजवादी नेता डा. राम मनोहर लोहियाका अनुयायी बताइन्छ । उनी प्राय भाषणहरुमा डा. लोहियाको यो भनाई– ज्यूँदो देशले (परिवर्तनका लागि) पाँच वर्ष पर्खिदैन – भन्ने उल्लेख गर्दछन । डा. लोहियाले संसदको पाँच वर्षे अवधि जनताको कामगर्नका लागि हो, काम नगर्ने सरकार हटाउन पाँच वर्ष कुरी राख्नु जरुरी नभएको मान्यता भारतीय राजनीतिमास्थापित गरेका थिए । राजनीतिगर्ने मानिसले डा. लोहियाको यो वाक्यको मर्म र महत्व वुझनु पर्दछ ।
उत्तर प्रदेश, भारतका मुख्यमन्त्री महन्थ आदित्यनाथ विवाह पन्चमीको मेलाभर्न जनकपुरधाम आउँदैछन । उनको नेतृत्वमा सीतासंग विवाहका लागि भगवान रामसंग जन्ती आउँदैछन । योगी आदित्यनाथ रामका अवतार होइनन । उनीहरु जनकपुरधाम आउँदा भगवान रामको प्रतिमा लिएर आउलान । कुरा त्यतिसम्म हो । धेरैले आ–आफना स्वार्थको रोटी पकाउन योगीको आगमनलाई राजनीतिक रंगमा डुबाउने प्रयत्न गरेपनि अन्ततः यो भ्रमणलाई योगीको तीर्थयात्राभन्दा बढी केही भन्न मिल्दैन । उनको यात्राकालमा रेलवेको उद्घाटनका नहुने स्पष्ट भै सकेको छ । धेरैले योगीको भ्रमण राज्य सरकारको निम्तोमा हुन लागेको पनि बताएका थिए । त्यो पनि असत्य सावित भै सकेकोछ । राज्य सरकार भगवा रंगबाट रंगिने कारण छैन । यद्यपि, राज्य सरकारलाई विवादमा फँसाउने चेष्टाहरु नभएका होइनन । जे भएपनि, योगी आदित्यनाथको भ्रमणले दुबै ऐतिहासिक शहरलाई फाइदा भएकोछ । यही मौकामा लखनउका वारे रमाइला जानकारीदिने प्रयत्न गरिएकोछ यो पटक ।उर्दू भाषामा “नजाकत” शव्दको अर्थ हुन्छ – सभ्य, शिष्ट र सांस्कृतिक । उत्तरप्रदेशका मुख्यमन्त्रीको यात्राले सभ्य, शिष्ट र सांस्कृतिक शहर लखनउसंग जनकपुरकोप्रत्यक्ष सम्वन्ध जोडिन्छ । कुनै समयमा अवध राज्यको राजधानी थियो लखनउ । यहाँका नवावहरु शासनमा भन्दा शिष्टाचारमा अलमलिन्थे रे । “पहले आप र पहले आप” भन्दा भन्दै नवावहरुले राज्य गुमाएका किस्सा र किम्वदन्तीहरु लखनउ र त्यो शहर वरपरका नगरहरुमा बग्रेल्ती प्रचलित छन । अवधका नवावहरुको अंग्रेजहरुसंगको युध्दमा अंग्रेजी फौजले लखेटदा भाग्दै थिए एकजना नवाव । त्यहीवेला उनको जुत्ता फुक्लियो । जुत्ता कसरी लाउने हो ? उनले जानेका थिएनन । जुत्ता लगाइदिने सहयोगी खोज्दा खोज्दै उनी अंग्रेजको कब्जामा परे । “किन भागेनौ तिमी ?” प्रश्नको जवाफमा उनले भनेका थिए, “मेरो जुत्ता लगाइ दिने कोही सहायक थिएन । म आफैं जुत्ता लगाउन जान्दिनथें ।” नवावहरुका किस्सा एक होइन लाखौं छन । नवावका किस्सा र कहानीका पुस्तकहरु हजारौं हजारको संख्यामा लेखिएका छन । नवावहरुको विलाशपूर्ण जीवनको सम्झना भारतमा मात्र होइन, नेपालमा पनि गरिन्छ । नेपालगन्ज शहरको संरचनाहेर्ने हो भने त्यसमा नवावकालीन अवध राज्यको महल र मकवराहरुको प्रभाव स्पष्ट देखिन्छ । नेपालगन्जको बजारमा वनारस शहरको गल्ली र लखनउ शहरको सौन्दर्यको मिश्रित प्रयोग भएकोछ । वास्तुकलाका अदभूत नमूनाका रुपमा रहेका विशाल दरवारहरुको आधुनिकीकरण र प्रयोगले लखनउ शहरलाई जीवन्त वनाएको छ । इतिहासको सम्मानगर्न अलिकति पनि कन्जुसी गरेका छैनन लखनवीहरुले ।नेपाली जीवन हाम्रा नेपाली नेताहरुकै कारण ह«ासोन्मुख हुँदैै गएको छ । नवावहरुको पतनको कारण पनि नवावी नैे थियो । उनीहरु आर्थिक र राजनीतिक गतिविधिहरुमा भन्दा वढी सांस्कृतिक र सांगीतिक विकासतिर ढल्केका थिए । मुजरा र शायरीको आकर्षणमा चुर्लुम्म डुवेका । शक्ति र सत्ताको सुरक्षाको चिन्ता थिएन उनीहरुलाई । यही परिवेशमा भएको थियो लखनउको विकास। अहिले पनि लखनउले यो परिवेशलाई छाडेको छैन । जताततै पार्क र मनोरन्जन स्थलहरुको निर्माण भइ रहेकोछ । जनताका लागि सुविधाहरु बढदा छन । खुला छ लखनउ । उत्तर भारतमा यत्तिको सफा, विकसित र सभ्य शहर अर्को छैन पनि होला । भारतको नयाँ पुस्ताले सवैभन्दा ठूलो संघीय राज्य भएर पनि विकासका मामिलामा पछि परेको उत्तर प्रदेशलाई विकसित राज्यको अघिल्लो पंक्तिमा उभ्याउने भाषण गरेका थिए । तर, उनीहरुको राज्य चल्न सकेन । मुलायमसिंह यादवका छोरा अखिलेश यादवको नेतृत्व प्रभावकारी थियो । तर, स्थानीय राजनीतिको आवश्यकतालाई सम्बोधनगर्न सकेनन अखिलेशले । पछिल्लो चुनावमा सरकारको नेतृत्वमाथि भारतीय जनता पार्टीले कव्जा जमायो । त्यसैबेलादेखि महन्थ आदित्यनाथ उत्तरप्रदेशका मुख्यमन्त्री बनेका छन । उनको नेतृत्वले अनेक विवाद जन्माएको छ । मुख्य कुरा त हिन्दू र मुसलमान बीच सदभावको स्थापना नै पहिलो हो ।आदित्यनाथले भारतको अयोध्यामा राम मन्दिर बनाउने र त्यहाँ संसारकै सबैभन्दा अग्लो रामको प्रतिमा ठड्याउने बताएका छन । राम मन्दिर जहाँ बनाउने भनिएको छ त्यहाँ सन १५२८–२९ मामुसलमान वादशाह बाबरले निर्माण गरेका विशाल मस्जीद थियो । राम मन्दिर पनि संगै थियो । विवाद त्यसैमा थियो । दिसम्बर ६, १९९२ मा भाजपाका प्रभावशाली नेता लालकृष्ण अडवाणीको नेतृत्वमा बाबरी मस्जिदमाथि हिन्दू स्वयमसेवकहरुले हमला गरेरमस्जिद भत्काएका थिए ।“मेरा निर्वाचित सहयोगीहरु वेरोजगार छन । म उनीहरुलाई विकासका काममा सक्रिय वनाउन खोजी रहेको छु,” भारतीय जनता पार्टीले चुनाव जित्नुअघि उत्तर प्रदेशका वाहुवली नेता मुलायम सिंह यादवका छोरा अखिलेश यादवले भनेका थिए । उनी निर्वाचित प्रतिनिधिलाई दायित्व विहिन राख्न चाहदैनथे । निर्वाचित नेताहरुलाई विकासको केन्द्र विन्दूमा निर्देशकको भूमिका दिएर राख्नु पर्दछ भन्ने उनको सोच थियो । नाराले मात्र देश वन्दैन । विकासका प्राथमिकताहरु तोकिनु पर्दछ । अखिलेशको हकमा यति भन्न सकिन्छ– उनलाई यस कुराको पूरा ज्ञान थियो । तर उनी हारे । नराम्रोसंग हारे ।उनी हारेपनि भारतका राजनीतिक दलहरुमा युवा पुस्ताको वर्चस्व वढदै गएको छ । विहारका नीतिश कुमार, उडिसाका नवीन पटनायक, उत्तर प्रदेशमा राहुल गान्धी लगायतका धेरै युवा नेताहरुले राजनीतिको कठिन यात्रा तय गरेका छन वा गर्दैछन । यी मध्ये नीतिश कुमारलाई छाडेर सवैले आफना पिताको उत्तराधिकारित्वमा पाएका छन राजनीति । उत्तराधिकारित्व पाउनु नराम्रो होइन । पाएर सफल नै वन्न सकिन्छ भन्ने कुनै सूत्र पनि छैन । उत्तर प्रदेशकै कुरागर्ने हो भने त्यत्रा दिग्गज नेता मुलायमसिंहका छोराले इन्दिरा गान्धीका नातीलाई वढारी दिए चुनावमा । जनताले राहुलको विकासका एजेन्डालाई रत्तिभर अनुमोदन गरेन । अखिलेशका पिता मुलायम सिंह यादवलाई समाजवादी नेता डा. राम मनोहर लोहियाका अनुयायी बताइन्छ । उनी प्राय भाषणहरुमा डा. लोहियाको यो भनाई– ज्यूँदो देशले (परिवर्तनका लागि) पाँच वर्ष पर्खिदैन – भन्ने उल्लेख गर्दछन । डा. लोहियाले संसदको पाँच वर्षे अवधि जनताको कामगर्नका लागि हो, काम नगर्ने सरकार हटाउन पाँच वर्ष कुरी राख्नु जरुरी नभएको मान्यता भारतीय राजनीतिमास्थापित गरेका थिए । राजनीतिगर्ने मानिसले डा. लोहियाको यो वाक्यको मर्म र महत्व वुझनु पर्दछ । यतिबेला मुलायमसिंहको हातमा सत्ताको साँचो छैन । संसारकै राजनीतिमा पुस्तान्तर हुँदैछ । योगी आदित्यनाथ नयाँ पुस्ताका राजनीतिज्ञ हुन । उनी हिन्दूहुन । हिन्दूत्वको राजनीति गर्दछन । यतिबेला राजनीतिका नयाँ परिभाषाहरु स्थापित हुने तरखरमा छन । यथासमय संसारका देशहरु व्यापक परिवर्तनको बाटोमा लाग्नेछन । हाम्रो आफनै देशलाई हेरौं ः काठमाडौं राजनीतिको केन्द्र विन्दूमा छ । संघीय परिवर्तनपछि पनि राज्यहरुमा यसको प्रभाव घटन थालेकोछ । काठमाडौ अव राष्ट्रिय राजनीतिका महत्वपूर्ण विषयहरुमा सीमित हुदै जानु पर्दछ । यो स्वाभाविक परिवर्तन हो । राजनीतिको विकासवादी धारको प्रभावले गणतन्त्रको लोकतान्त्रिक स्वरुपलाई निश्चित आकारमा ल्याउँछ । यसलाई सानो उपलव्धि भन्न मिल्दैन ।नेपालमा नयाँ राजनीतिक नेतृत्व निखारिन र तिखारिन पाएको छैन । राजनीतिक आधारहरुलाई पुन परिभाषित गर्नका लागि उपयोगी सावित हुन नयाँ पुस्ता तिखारिनै पर्दछ । अहिले प्रमुख पार्टीका सबै नेताहरु साठी बर्षमाथिका छन । साठी बर्ष राजनीतिबाट अवकाशलिने उमेरको सीमा बनाइनु पर्दछ । यसका लागि अहिलेका नेताहरुले आफनो मनस्थितिमा परिवर्तन ल्याउनु पर्दछ । चीनको राजनीतिमा नयायुवा नेतृत्व स्थापित भएको छ । त्यहाँ कुनै समस्या छैन । उनीहरु जनताका आवश्यकता अनुसार रुपान्तरणमा लागेका छन । भारतमा त्यही क्रम शुरु भएकोछ । यो अवस्थामा नेपालले नयाँ वाटो लिन सकेन भने हामी पछि पर्नेछौ । यसमा शंका नगरे हुन्छ ।